सान्जेनको आइपीओ भर्ने म्याद सकिदै, के तपाईले भर्नु भो ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सान्जेनको आइपीओ भर्ने म्याद सकिदै, के तपाईले भर्नु भो ?
काठमाडौँ - सान्जेन जलविधुत कम्पनीको आइपीओ भर्ने म्याद मंगलबारसहित गरेर २ दिन मात्र बाकी रहेको छ । बुधवार कार्यालय समय भित्र सम्म यो आइपिओ भरि सक्नुपर्ने छ । कम्पनीले फाल्गुन ११ गतेदेखि फागुन ३० सम्मको लागि आइपीओ खुल्ला गरेको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले कुल ८७ लाख ६० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन खुला गरेका छन् । सान्जेनको आइपीओमा कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच ऋण सम्झौता भएको २०६८ मंसिर २२ गतेसम्म बहाल र त्यसपछि विवरणपत्र स्वीकृत भएको २०७४ मंसिर २६ गतेसम्म थप भएका सञ्चयकर्ता, संस्थापक संस्थाका कर्मचारीहरु र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीहरुले सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सान्जेनको बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष हो । लगनीकर्ताले आस्वा सदस्य सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।